सिन्धु शब्द सरोवर Sindhu Sabda Sarobar: May 23, 2016
भेटिएन कुनै सुसाइड नोट
— सबिना सिन्धु
फराकिलो निधार भएकी मृत युवती
जसलाई समाचार बनाइरहेछ पत्रिकाले ।
फलाकिरेहछ रेडियोले ।
प्रश्रय दिइरहेछ टेलिभिजनले ।
कुनै दिन म बन्न सक्छु त्यही पात्र ।
पत्रिकामा देखिएको रगत लत्पत्एिको विभत्स तस्विर
त्यो मेरै पनि हुनसक्छ ।
जसले लगाएकी छे सेतो हाफ—टिसर्ट ।
जुन च्यातिएका छन् ।
लगाएको लामो मिडी, अस्वभाविक देखिन्छ ।
पत्रकार फलाक्न ब्यस्त छन् ।
बढाई चढाई लेख्न पाए बढी बिक्थ्यो पत्रिका ।
बढी चिनिन्थ्यो न्युज च्यानल ।
लगातार फलाकिरहेछ युवतीको उमेर र प्रेम प्रसङ्ग
जुन उमेर भन्न ऊ लजाउँथी ....
सोच्थी प्रेमीलाई जिवनसाथी ।
श्रोता लगाइरहेछन् ‘हचुवा’ अनुमान ।
अड्कलबाजि गरिरहेछन् अन्य मानिस
“किन मरी वा मारिइ त्यो युवती ।”
कि मार्‍यो उसैको प्रेमीले वा अन्य कसैले ?
थियो कि कुनै रिसइवी ?
धारिलो हतियारले बनाएको हो कि त्यो घाउ
वा कुनै चुच्चो ढुङ्गाले ?
वा आफैं ठोकिई चट्टानमा ।
.... ‘सुसाइड’ पनि त हुन सक्छ !
तर भेटिन्न कुनै सुसाइड नोट ।
.......कसका हुन् सनाखत हुन बाँकी अन्य सामान ?
तयार पार्नै थियो घटनास्थल मुचुल्का ।
नाडीमा देखिन्थ्यो कोतरीएको घाऊ
र लामो निलडाम पनि ।
त्यो युवती जो अहिले मृत घोषित भएकी छे ।
पत्रिकाले लेखिसकेको छ विस्तृत विवरण
जसले लगाएकी थिई सेतो रङ्गको हाफ टि—सर्ट ।
उल्लेख भएको उसको उमेर र मेरो उमेर एउटै थियो ।
पत्रिका पढ्छु अनि झस्किन्छु ।
समाचार सुन्छु र तर्सिन्छु ।
लाग्छ तिम्रो पत्रिकाले छापिरहेछ मेरो ‘न्युज’
Posted by sabina sindhu at 11:46 PM No comments:
(याे काल्पनिक कथा हाे .....र कथा मात्रै हो ।) — सबिना सिन्धु
“ओई कति बेला आइपुग्छेस् रुपमाँया आइपुगिन् ।” श्रेणितीले फोन गरी
“गेटमै आइपुगेँ ।”, मैले भनेँ अनि मोबाइल प्यान्टको पकेटमा राखेँ।
म कोठामा छिर्दा रुपमाँया आफ्नो कहानी सुनाउन थालिसकेकी थिइन् । मैले डिस्टर्ब गर्नु उचित ठानिँन । त्यसैले झोला साइड लगाएर राखी कुर्सी तानेर बसेँ।
“म निर्दोष थिएँ । अझै पनि भन्छु म निर्दोष छु । अनाहकमा उनीहरुले मलाई जेल हाले ।”, उनी भन्दै थिइँन् ।
उनले यति भन्दा मलाई कुनै करुणा जागेन । मैले उनको अनुहारमा राम्रोसंग हेरेँ । उनको चाउरी परेको निधारमा अपराधि भन्ने निशाना लागेझैं थियो । भो यी अपराधि सबै यसै भन्छन् । आखिर मैले सुनेकी रुपमाँया कर्तब्य ज्यान मुद्दामा सजाय भोगेर आएकी थिइन् । उनको उर्बर उमेर जेलमा बितेको थियो ।
“अपराध नै नगरी कसरी सजाय पाउनु भयो त ? त्यस्तो त हुनु नपर्ने”, मैले भनेँ ।
“त्यस्तै भयो । म परिबन्दमा परेँ।”, उनले भनिन् ।
“हत्या अर्कै ब्यक्तिले गरेको थियो । ऊ त सजायको भागिदार नै थियो । तर म चाहिँ ब्यर्थमा फसेँ मात्र । उनीहरुले मलाई ‘अपराधमा संलग्न भनी ठह¥याए । म निर्दोष छु भन्दा भन्दै......”, यति भनिसक्दा उनको आँखाबाट आँशु खस्यो ।
“चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न सक्नु हुन्थ्यो । आफू निर्दोष हुनुको प्रमाण जुटाउन सक्नु हुन्थ्यो । कानूनी प्रक्रियाहरु थिए नि !”, श्रेणितीले भनी
“खै के के हो म जान्दिन । वकिलहरुसंग सल्लाह लिएकै हो । जे गर्नु उनीहरुले गरे । केही नगरेकै पनि होइन ।”, रुपमाँया ले भनिन् ।
यी सबै वाहियात नाटक मैले सोचेँ । बिना प्रमाण त अपराधि ठहरिन्न भन्ने मेरो बुझाई थियो । तैपनि मैले उनको कुरा सुन्न छुटाइँन । यसकारण कि मलाई उनको कुरा कुनै काल्पनिक कथा जस्तो लागिरहेको थियो । जुन कथामा कथा वाचकले भूमिकाहरु सहजै फेर्न सक्छ । जुन कथा थपघट भएको पत्तो हुन्न म जस्ता श्रोतालाई ।
श्रेणिती सुन्दै थिई । उसलाई पनि रुपमाया को कथामा विश्वास लागेको थियो जस्तो लागेन ।
“म जेल परेपछि श्रीमानले अर्को बिहे गरे । उनीहरुको आफ्नै ब्यबहार बन्यो । सन्तान जन्माए । उनीहरु अहिले पनि सुखी छन् ।”
“अनि तपाइँका छोराछोरी नि ।”, मैले सोधेँ।
“छोराले आठ कक्षा पढ्दा पढ्दै पढाई छोडेछ । ऊ मायाको भोको थियो । बाबु चाहिँलाई के मतलब ? म जेल बाहिर हुन्थे त म उसलाई सही मार्गमा लगाउँथेँ । ऊ ड्रगिस्ट भयो । अनि एकदिन आत्महत्या ग¥यो । करिब एक वर्ष पछि मात्र मैले ऊ मरेको खबर पाएँ ।”, फेरी पनि उनका आँखाबाट आँशु झरे ।
“अनि छोरी नि ।”, श्रेणितीले सोधिन्
“ऊ कहाँ गई । के गरी थाहा छैन । दश कक्षामा पढ्ने भएपछि ऊ हिँडी । साथमा लुगाफाटा र बाबु चाहिँसंग झगडा गरेर पाँच हजार पैसा बोकेर हिँडेकी थिई ।”, उसको बाबु त्यसै भन्थे ।”
“म जेल बाहिर हुन्थेँ त मेरा छोराछोरी तपाईँहरु जस्तै पढे लेखेका हुन्थे । सही बाटोमा हुन्थे । कम्तिमा ब्याचलर गराउँथेँ । मैले पनि एसएलसी सम्म त पढेको छु ।”
“.........तर अपसोस छोरा दुनियाँमै छैन । सर्वोस्व बितायो जेलले”
“साँच्चि मलाई विश्वास गर्नुस् म निर्दोष थिएँ । म सजायको भागिदार हैन ।”, रुपमाँया अझै बिगत सम्झेर रुँदै थिईन् ।
“यो कुरा, म मरेपछि ईश्वरको न्यायलयमा यसैगरी भन्नेछु ।”, रुपमाँया रोइन् ।
यसपटक मैले सोचेँ । यदि साँच्चै रुपमाया निर्दोष थिईन् भने उनले जेलमा बिताएका उनका उमेरहरु के फिर्ता आउँन सक्छन् ? फेरी त्यही ड्रगिस्ट छोराले आत्महत्या गर्नु अघिको समय अथवा ड्रगिस्ट हुनु भन्दा अघिको समय फिर्ता आउन सक्छ ? ....सक्दैन ।
रुपमाँया को कुरामा कहाँसम्म सत्यता थियो म जाँन्दिन् । वास्तविकता के थियो मैले बुझेको छैन । म कानूनको विज्ञ होइन । तर रुपमाँयाले आफ्ना कथा सुनाउँदा सुनाउँदै म भक्कानिएर रोएँ । आँशु थाम्न खोजेँ थामिएनन् ।
Posted by sabina sindhu at 1:18 AM No comments: